Ukulimala nezinzuzo ze-sorbitol njenge-sweetener yemvelo > Ukudla ngesifo sikashukela
I-Sorbitol - khuluma ngezinzuzo nokulimala kwe-sweetener yemvelo eyaziwayo
Namuhla, umthengi ojwayelekile usetholakale ezimpahleni, ukusetshenziswa okungafanelekile okungadala umonakalo omkhulu empilweni. Sizothola ukuthi ukulimala kwe-sorbitol kuyini nezinzuzo zayo.
Photo: Depositphotos.com. Kuthunyelwe ngu: Photosiber.
Kuze kube manje, i-sorbitol isitholile indawo yayo:
embonini ye-confectionery njenge-sweetener,
ekhemisi - engeza ezibhebheni, isiraphu, ama-laxatives,
embonini yokudla - ekuthengweni kwenyama nemikhiqizo eseqedile,
ekukhiqizweni kokudla okutholakalayo,
ku-cosmetology - ukudala okhilimu neminye imikhiqizo.
Emkhakheni wokudla, i-sorbitol idume kakhulu ngoba inamandla amakhulu okugcina umswakama. Kuthuthukisa ukunambitheka kwemikhiqizo futhi yelula impilo yayo yeshalofu.
Kwe-pharmacology, le iswidi isetshenziselwa ukwenza ngcono ukunambitheka kwemithi, ukuthuthukisa umphumela wamaphiloji, kanye nokunikeza ukuvumelana okudingayo emithini.
Izici ezinhle kakhulu ze-hygroscopic zalesi zinto zivumela ukusetshenziswa kwawo ekwenziweni kwamazinyo, imaski yezimonyo nama-gels okugeza.
Le sweetener imunca ngokuphelele uhlelo lokugaya ukudla komuntu futhi inomsoco kakhulu.
Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kwayo kunciphisa ukusetshenziswa kwamavithamini we-B, ikakhulukazi i-biotin (B7, noma H).
Ukungeza i-sorbitol ekudleni kuthuthukisa i-microflora yamathumbu. I-sweetener inomphumela oqinile we-laxative, isiza ekuhlanzeni umzimba masisha nangokuphumelelayo.
Isetshenziselwa ukugula kwepheshana lesisu:
Inzuzo iboniswa eqinisweni lokuthi le iswidi isiza ngezifo zohlelo lwezitho zofuzo:
Ukuhlanza nge-3% solution yesinye,
Isixazululo esingu-40% sinqunyelwe ukwehluleka kwe-renal acute noma ngemuva kokuhlinzwa.
ISorbitol imvamisa isetshenziswa esikhundleni sikashukela ngabantu abafuna ukunciphisa umzimba noma ukwenza ukudla kwabo kube nempilo. Faka eziphuzweni, iziphuzo ezikheniwe ekheniwe, ukhukhamba, amakhekhe kanye nepalishi yobisi. Kepha akumelwe sikhohlwe ukuthi ukulimala kwalesi sithole sokusetshenziswa ngokweqile sikhulu impela. Abantu abanempilo abanenkinga yesifo sikashukela akufanele bangenele i-sorbitol, futhi empeleni noma yikuphi okunye okungangena esikhundleni sikashukela.
Njengomuthi, isetshenziswa ngokuqinile ngokuya ngemiyalo nangaphansi kokuhlolwa ngudokotela.
Le nqubo ikuvumela ukuba uhlanze isibindi, izitho zokuzala kanye nezinso, kunciphisa amathuba esihlabathi namatshe ezinso. Kepha uma sebevele sebakhekile gallbladder, i-tyubazh i-contraindication futhi ingaba yingozi.
Kuyadingeka ukulungiselela ukumnika kwe-rose okhalweni bese uyixube nenani elincane le-sorbitol. Ngemuva kwalokho, uketshezi oluholelayo luphuzwa esiswini esingenalutho kanye ngesonto.
Indlela echaziwe ingadala ukulethwa kwezinto ezibalulekile njenge-calcium ne-potassium emzimbeni. Kunobungozi bokucanuzelelwa kwenhliziyo, isifo sohudo, ukuquleka.
Ukuvimbela inqubo yokuhlanza isibindi ingakulimazi, thinta uchwepheshe kuqala.
Inqubo ivula imigqa ye-bile, isiza ukunciphisa i-gallbladder futhi icasule ukuphuma kwe-bile emile. Isiza ukususa isihlabathi esihle.
Ukuze kuzwakale, izingilazi ezi-2 zamanzi amaminerali afudumele angenawo amakhabhoni axutshwe nenani elincane le-sweetener adakwa njalo ekuseni. Phakathi kokuthatha imithamo yomuthi wokuqala nowesibili, thatha ikhefu imizuzu engama-20. Ngemuva kokuthi lo muntu adinga ukulala phansi, beka ibhedi lokushisa endaweni ye-hypochondrium efanele bese uphumula amahora amaningi.
Ukuzwakala kwezimpumputhe kuphindaphindwa ngezikhathi ezithile kungakhathalekile ukuthi ziyanda kangakanani izifo zezifo zesisu.
Ukulimala nemiphumela emibi
Ukulimala kwe-sorbitol kubangelwa inani elikhulu lemiphumela emibi, efana:
ukungakhululeki esiswini esingezansi,
Ngakho-ke, akufanelekile ukwenza i-sweetener ibe isengezo sansuku zonke setiye, ikofi, nemikhiqizo yokudla.
Ngaphambi kokusebenzisa, xoxa ngesinqumo sakho nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ukusiza ukuthola ukuthi ukufaka esikhundleni sikashukela we-sorbitol kuzozuzisa impilo yakho.
Imithamo ephezulu ingaba nomthelela omubi emzimbeni, kufaka phakathi nokubangela:
ukuphazamiseka kwendlela yokugaya ukudla
Ngakho-ke, umuthi kufanele uphathwe ngokucophelela okukhulu, uqaphe ngokucophelela ukusabela komzimba.
ISorbitol akufanele ithathwe nezifo ezilandelayo:
ama-ascites (isisu esidonsayo),
cholelithiasis (isifo senyongo).
Ingozi ile lokuthi iqiniso lokuthi lo mswidi unokunambitheka okungasho lutho kunoshukela. Ngakho-ke, abantu bavame ukungeza izinkezo eziningana kwitiye noma ekhofi kanyekanye, ngenxa yalokho badlula umthamo ovunyelwe nsuku zonke futhi bathola amakhalori amaningi awengeziwe.
Okwamanje, izinkinga zokuhambisana nezinye izidakamizwa azikhonjwanga.
Uma kwenzeka kweqisa ngokweqile, ukulimala kwalesi siphuzo sokuthambisa kuthinta ikakhulukazi umsebenzi wegaya lokugaya ukudla futhi kucasule ukuthokomala, uhudo, ukugabha, ubuthakathaka obukhulu, ubuhlungu esifundeni sesisu. Ngokuvamile kubangela isiyezi. I-Sorbitol ayithandeki ukuyisebenzisa nsuku zonke, futhi umthamo wayo wansuku zonke akufanele udlule ku-30-40 g kumuntu omdala. Ngasikhathi sinye, inani le-sweetener emikhiqizweni engaqediwe, inyama eluhlaza, iziphuzo ezilungiselelwe, amanzi acwebezelayo ne-confectionery kufanele icatshangwe.
Ungawukhetha kanjani umkhiqizo omuhle futhi uhlole ikhwalithi yawo
Lokhu kungumkhiqizo wemvelo, okhiqizwa ngokuthengisa kusuka emaphethweni ommbila. Itholakala njengama-tile noma i-powder.kufana noshukela ogcotshwe ngaphandle.
Umkhiqizo wekhwalithi kumele uhlangane ngokufana futhi ungabi nezinqwaba. ISorbitol iyi-hygroscopic, ngesitoreji esingafanele, ifomu lesigaxa kuyo, elingachotshozwa ubunzima.
Ochwepheshe beluleka ukuthi bacabangele intengo lapho bethenga - Izimpahla ezisezingeni eliphakeme azibizi.
Ngokwesithenjwa ungathatha imikhiqizo yenkampani yeNovaSvit (Novasweet), okungumholi kule ngxenye yezokukhiqiza: izindleko zephakethe yekhilogremu kusuka kulo mkhiqizi kusuka kuma-ruble ayi-155 kuya kwangama-185.
Ama-sweeteners angokwemvelo futhi enziwe ngezinto zokwenziwa. Eyokuqala ngokuhlangana ne-sorbitol ifaka:
Phakathi koswidi lokwenziwa okwaziwa kakhulu yile:
Yini i-sorbitol phakathi kwazo zonke lezi zidakamizwa? Lo ngomunye wemikhiqizo engcono kakhulu yale nhloso, ngoba empeleni ayiniki imiphumela emibi.
Ngokuqondene ne-cyclamate, imibono ayisihlukanisi kangako, kodwa futhi kuphakamisa nokukhathazeka ochwepheshe abazama ukukuphikisa noma ukukuqinisekisa ngenkathi kwenziwa ucwaningo lwesayensi, olungakaphothulwa. I-Acesulfame inedumela elingcono, kepha ingaba yingozi kubantu abanokuhluleka kwenhliziyo.
Ngokuqhathanisa i-sorbitol ne-fructose, ochwepheshe bayazi: i-fructose imnandi futhi inambitheka emnandi kakhudlwana, kepha icasule ukuvela kwamafutha, kuholele ekucindezelweni okukhulu, kufaka phakathi indlela yokucindezela kwamaselula, inyusa inani le-uric acid ekhiqizwayo.
IXylitol neStevia banezinzuzo ezibalulekile - Lezi zinto azinawo amakhalori, ngakho-ke zingasetshenziswa ngabantu abakhuluphele ngokweqile. I-Stevia elandelayo elandelayo - amandla okucindezela izifiso zamaswidi.
Emakhasini esayithi lethu uzofunda nangezinzuzo, ukulimala kwejusi yamazambane, ukusetshenziswa kwayo kwezokwelapha zendabuko.
Ngabe yini inzuzo ye-rutabaga kwezempilo? Izici ezibalulekile zesitshalo sezimpande, izindlela zokupheka zalo, bheka kulesi sihloko.
Mayelana nokuthi yisiphi isitshalo sokwelapha isitshalo se-anisex esinaso, mayelana nokusetshenziswa kwaso ku-cosmetology, funda lapha: https://foodexpert.pro/produkty/travy-i-spetsii/badyan.html.
Ukwakheka, amakhalori nge-100 g, inani lomsoco kanye nenkomba ye-glycemic
Ukwakheka kwamakhemikhali i-sorbitol utshwala obunama-athomu ayisithupha. Emkhiqizweni oqhubeka uthengiswa, wenza ama-95,5% wesisindo esiphelele, uqukethe umlotha wamaphesenti ayi-0,5 nomswakama wamaphesenti amane.
Le nto itholakala emvelweni - kuze kufike ku-10 g kuwo wonke ama-100 g we-sorbitol ezithelo ezomile - ama-prunes, ithini lamapheya, ama-cherries. Iningi layo emlotheni wasentabeni, okhalweni lwasenyakatho.
Inkomba ye-glycemic iphansi, kusukela kumayunithi ayi-9 kuya kwayi-11 (ukuqhathanisa: ushukela unamayunithi acishe abe ngu-70, i-fructose ine-20).
Izinzuzo zezempilo ezijwayelekile, izinkomba zokusetshenziswa
Le nto inezinto eziningi ezisebenzayo. It:
yenza kube lula ukusebenza kwamathumbu,
akukho ngozi emazinyweningoba akubangeli ukubola kwamazinyo,
yenza imisebenzi ye-choleretic,
alucasuli ulwelwesi lwama-mucous,
ayinamphumela omubi esibindini,
neqhaza ekunakekelweni kwamavithamini we-B,
kuyaqabukela kubangele ukusabela komzimba,
kusiza ukubhekana nokudakwa (kufaka phakathi utshwala)
igcina izici zayo lapho ifudunyezwa emazingeni okushisa aphezulu.
Kwabesilisa nabesifazane abadala
Imiphumela ezuzisayo kubantu abadala:
singasetshenziswa yilabo ushukela obekelwe wona (ngokwesibonelo, abanesifo sikashukela),
ingasetshenziswa ukuhlanza isibindi, izinso, izindunduma ze-bile,
okunqunywe njenge-laxative noma i-diuretic (uma kukhona ingozi ye-pulmonary edema).
okuqukethwe okuphezulu kwekhaloriingozi yokukhuluphala, ukukhuluphala,
ukunambitheka okuthile okungeke kutholwe yiwo wonke umuntu,
ingozi yokuphelelwa ngamandla emzimbeni (ngenxa yesifo sohudo)
imiphumela emibi ohlelweni lwezinhliziyo.
Imikhawulo eyenza ukuthi kuguqulwe imenyu yowesifazane okhulelwe futhi okhanyayo kuyasebenza naku-sorbitol. Ngokusho kodokotela, kulesi sikhathi esibucayi, kufanele ulahle noma yiziphi izinambuzane - zokwenziwa kanye nemvelo, ukuhlinzeka kuqala ingane, futhi kamuva ingane, ngamandla emvelo emsulwa, okusho ukuthi, ushukela, obalulekile ekwakhekeni okuvamile kwazo zonke izitho, ubuchopho.
Uma umama okhulelwe ephethwe yisifo sikashukela, udokotela uzomsiza ekutholeni amanye amaswidi. Lolu luju, isithelo esomile noma i-sorbitol efanayo, kepha emavolini achazwe udokotela ngokuqinile.
Ezinganeni ezikhula ngokujwayelekile, faka ekudleni kokudla kanye nesiphuzo ne-sweeteners akukhuthaziwe ukuya kufinyelela eminyakeni eyi-12. Ushukela wemvelo uyadingeka kubo kule minyaka - umunca ngokushesha, uya ukubuyisa amandla i-organ organisation ekhula ngawo.
ISorbitol imvamisa ibekelwe izingane ezinokuxilongwa kwesifo sikashukela., ukwakhiwa kwawo kulezi zimo kuhamba kahle uma kuqhathaniswa nezinye izinambuzane, ikakhulukazi zokwenziwa. Uma udokotela ekuvumela ukuthi ngezikhathi ezithile uhlanze ingane yakho ngamaswidi, khona-ke lawa maswidi e-SULA enziwe nge-sorbitol.
Endabeni yabantu asebekhulile, indlela yomuntu ngamunye ibaluleke kakhulu.. Ebudaleni, abaningi bahlushwa ukuqunjelwa - i-sorbitol ingaba wusizo kubantu abanjengo-laxative. Uma kungekho nkinga enjalo, yi-sorbitol, futhi kungcono ukungasebenzisi izitsha ezilungisiwe nayo, ukuze ungaphazamisi ukusebenza okujwayelekile kwepheshana lesisu.
Ngisho nabanesifo sikashukela, okusobala ukuthi ukusetshenziswa kwama-sweeteners, kufanele baqaphele nge-sorbitol.
Amnandi kancane kunoshukela ojwayelekile., kodwa eduze kwayo kilojoule.
Ukuthola ukunambitheka okumnandi, kuzodingeka ukuthi ubeke enkomishini yetiye noma ekhofi ngaphezulu, okusho ukuthi okuqukethwe ikhalori kwesiphuzo kuzoba phezulu kakhulu.
Umphumela - Isisindo Sitholaukuthi kwabanesifo sikashukela sekuvele kuyinkinga enkulu.
Ngesizathu esifanayo, i-sorbitol ayisetshenziswa kakhulu emikhiqizweni yokudla okunempilo kwezemidlalo.ngaphandle kokuthi umsubathi udinga ukukhulisa isisindo.
Umuzwa wokulimaza walesi sithako kufanele uqaphele: qala izame ngamanani amancane, futhi uqiniseke ukuthi akukho ukusabela okungekuhle njengokuqhuma, i-urticaria noma isiyezi okulandelayo, kufake ekudleni kwakho.
Ngokwesilinganiso, abantu abadala bangadla kufika ku-30-50 g ye-sorbitol ngosuku (ngendlela emsulwa futhi njengengxenye yamaswidi, ujamu, namakhekhe, iziphuzo).
Kodwa-ke, kwabanye, ngisho ne-10 g kungenzeka kube ngumkhawulo., ongasakwazi ukudliwa, ukuze, ngokwesibonelo, isifo sohudo singakuhlukumezi.
Lapho usebenzisa umkhiqizo ngezinjongo zokwelapha, inqubo inje: Ama-5 kuye kwayi-10 g angadliwa ngesikhathi, inani lemithamo ngosuku izikhathi ezi-2 kuya kwezi-3, ubude besikhathi senkambo yokwelashwa busuka enyangeni kuya kumaviki ayi-10.
Imvamisa, ufulawa ufakwa emanzini afudumele bese uphuzwa ngaphambi kokudla.. Uma umuntu elashwa esibhedlela, angabekwa umuthi ngesimo sokwehla, inkambo yalokhu kwelashwa yizinsuku eziyi-10.
Odokotela abancomi ukuhlukunyezwa kwabasebenza ngama-sweeteners.
Njengoba kusetshenziswe kwezokwelapha, imiyalo yokusebenzisa i-powder
ISorbitol isetshenziswa ngenkuthalo kwezokwelapha, ikakhulukazi kwezemithi. Ifakwe ezidakamizweni ezidambisa ukuqunjelwa, kumasiphu wokukhwehlela namapuleti (kulezo ziguli ezifakwe ushukela), kwezithako zokugcoba, okhilimu, amazinyo, omamaski. Ngenxa yezindawo ze-hygroscopic ze-sorbitol, kungenzeka ukuthi unikeze la ma-ejenti izinga elifanele lomswakama.
Isixazululo esingamaphesenti amathathu salo muthi esibhedlela siphatha uhlelo lwezitho zofuzo.
Yini i-sweetener ye?
I-Sweetener yasungulwa okokuqala ngo-1879. Yathandwa kakhulu phakathi neMpi Yezwe yokuQala, lapho ushukela wawuphelelwa ngamandla.
Wonke ama-sweeteners ahlukaniswe ngamaqembu amabili:
Kuma-sweeteners wemvelo, i-stevia, i-xylitol ne-sorbitol ithandwa kakhulu. Ukulimala nezinzuzo zalezi zinto empeleni akuhlukile.
Ama-sweeteners wemvelo aphephile empilweni kunokwenza okwenziwa ngama-sweeteners, kepha futhi ayakhanywa ngumzimba futhi akhiqize amandla. Ngokuvumelana nalokho, futhi bane-khalori ephezulu, yize kungenjalo kangako. Iqembu lesibili alinawo amakhalori nhlobo futhi alithathwa ngumzimba.
Kunezinhlobo eziningi ze-sweeteners zemvelo. Lezi yi-fructose, i-xylitol, i-stevia ne-sorbitol. Izinzuzo nokulimazeka kwazo ngamunye kujabulisa abantu abaningi.
Izinhlobo zabaswidi kanye nokuhluka kwabo
I-Fructose iyinto yemvelo etholakala kuju, imbewu yezitshalo, amajikijolo nezithelo. Izikhathi eziyi-1.5 zinoshukela omnandi kunoshukela. Ngomcabango wokuthi inani lamandla we-fructose liyafana neloshukela, kungadala futhi ukukhuluphala. Ngakho-ke, akufanelekile ukunciphisa umzimba. Kepha i- fructose imunca kathathu kancane kancane kune-glucose. Umthamo omkhulu ngama-gramu ayi-45 ngosuku.
ISorbitol - yayinqunywa kusuka kuma-apricot, amajikijolo afriziwe aqandisiwe, imbewu yekotini kanye nommbila. Inambitha kancane futhi imnandi kunoshukela. Idonswa kancane ngumzimba, ngakho-ke ayithinti ushukela egazini. Umthamo omkhulu wansuku zonke angama-50 amagremu.
I-Xylitol - ifana kakhulu ngokwakhiwa kwe-sorbitol. Inambitheka kamnandi futhi imnandi. Olunye ucwaningo luye lwabonisa ukuthi le nto kumithamo emikhulu ingadala i-oncology. Kodwa-ke, ukusetshenziswa kwansuku zonke komkhiqizo ngaphakathi kwemikhawulo evunyelwe akubangeli ukulimala. Umthamo omkhulu wansuku zonke angama-50 amagremu. I-Xylitol ne-sorbitol ziyefana kakhulu. Izinzuzo nokulimala kwalezi zinto kucishe kufane.
I-Stevioside - Ikhambi lekhambi leStevia. Inokunambitheka okuhle nentengo enengqondo. Akuholeli ukukhuluphala. Ucwaningo lwale nto lubonise ukuthi i-stevioside ayinayo imiphumela emibi.
Phakathi kwama-sweeteners wemvelo, i-sorbitol ithandwa kakhulu. Izinzuzo zalo nokulimazeka kwehluke kakhulu kuma-analogues okwenziwa.
I-Acesulfame (E950) i-sweetener yokwenziwa. Awungenwa ngumzimba futhi unokuqukethwe okuphansi kwekhalori. Ingasetshenziswa emazingeni okushisa aphezulu okubhaka nokwenza i-confectionery. Kufakwe kubantu abanokuhluleka kwenhliziyo. Umthamo omkhulu wansuku zonke ngamagremu ayi-15 ngekhilogremu elilodwa lesisindo.
I-Cyclamate (E952) - isinongo sokwenza. Akunakhalori ngokuphelele. Kuboniswa abantu abanokukhuluphala kanye nokuphazamiseka kwemizwa. Akuvunyelwe kuwo wonke amazwe.Kunombono wokuthi i-cyclamate ingavusa izifo ze-oncological, noma kunjalo, ucwaningo lobuhlobo alukhonjwanga. Noma kunjalo, kukhona okuphula umthetho ngokusetshenziswa kwalesi sidakamizwa kwabesifazane abakhulelwe nababembelezayo, kanye nezingane ezincane.
ISaccharin (E954) iswidi elimnandi lamakhemikhali. Yasungulwa okokuqala phakathi neMpi Yezwe Yokuqala. Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi i-saccharin kwimithamo ephezulu ivusa kakhulu ukukhula kwe-oncology. Ukusetshenziswa njalo kwento ngamanani alinganisayo wentuthuko yama-pathologies akuzange kuveze. Yize emazweni amaningi, i-saccharin isesohlwini lwemikhiqizo evinjelwe.
I-Aspartame (E951) isithaphuthaphu esisezingeni eliphansi sekhalori. Phakathi kwamakhemikhali amakhemikhali yiwo athandwa kakhulu. Ayilungele ukupheka. Emazingeni okushisa angaphezu kwama-30 degrees Celsius iphenduka into eyisidumbu futhi icasule umdlavuza.
Okuwukuphela kwenzuzo yokufakwa esikhundleni samakhemikhali ukunambitheka kwabo okumnandi ukwedlula ushukela. Izinzuzo ezisele zisenezinto zemvelo:
Izinzuzo nokulimala kwama-sweeteners wemvelo akuqhathaniswa nokwenziwe.
Emazweni amaningi, ababambeli bemvelo bafuna okukhulu. Okuthandwa kakhulu yi-sorbitol. Izinzuzo nokulimazeka kwale nto akwaziwa yiwo wonke umuntu. Le sweetener inezici ezinhle ezilandelayo:
ungumenzeli oqinile we-choleretic,
ilungele ukwelashwa okuyinkimbinkimbi kwezifo zesibindi,
akubangeli ukubola kwamazinyo,
Inomphumela omnene we-laxative.
Uma isetshenziswa ngokulinganisa, kufika ku-50 amagremu ngosuku, ayinakho ukuphambana. Ngokulindela ukuthi kunambitheka okumnandi kunokushukela, ukukhuphuka kwenani elisetshenzisiwe kungenzeka. Uma le mithamo idluliwe, kungenzeka ukuthi kube khona ukuphazamiseka kwesisu okudala i-sorbitol. Ukulimala nezinzuzo zalo msebenzi kubonakala kakhulu.
Ngenxa yokungabikho kwemiphumela emibi emzimbeni, i-sorbitol ivunyelwe ukusetshenziswa ku-confectionery. Abaningi besifo sikashukela bathanda amaswidi we-sorbitol. Izinzuzo zalo nokulimaza kwalo akuqhathaniswa nezindawo zamakhemikhali ezifanayo. ISorbitol yengezwa eziphuzweni zokudla ezahlukahlukene, ama-pastries, okugcina nokulondolozwa. Le mikhiqizo inambitha ihlukile kancane kunejwayelekile. Zizinambitha kancane zimnandi futhi ziqonde ngqo. Kodwa ukusetshenziswa kwemikhiqizo enjalo akuyikhulisi ushukela egazini, ngakho-ke kuphephile ngokuphelele. Kepha usengathola isisindo ngokweqile ngokudla okukhona - okuqukethwe kwekhalori kwe-sorbitol akukuncane kangako kunoshukela. Qhathanisa:
Kumagremu ayi-100 kashukela - kilojoule angama-360.
Amagremu ayi-100 e-sorbitol - kilojoule angama-240.
Indlela yokuhlanza isibindi
Ekhaya, i-sorbitol ingahlanzwa kusuka kubuthi besibindi, kodwa kuphela ngemuva kokuthola le mvume yokuqala kudokotela ozobheka, ozonaka ubungozi kanye nokuphambana.
Ngobusuku benkambiso, ibhodlela lamaminerali lamanzi lishiywe livulekile ubusuku bonkeukususa wonke igesi kuketshezi. Ekuseni, amanzi ayavutha. Embizeni engu-250 gramu, amathisipuni angama-2-3 e-sorbitol ayabiwa.
Phuza esiswini esingenalutho. Ngemuva kwalokhu, kubalulekile ukulala phansi kusuka emizuzwini engama-40 kuya emahoreni amabili, ohlangothini lwesokunene, ngephedi lokushisa.
Ngalesi sikhathi (imizuzu engama-20 ngemuva kokudakwa kwamanzi amaminerali), udinga ukuqeda okusele ebhodleleni, kepha ngaphandle kwe-sweetener.
Ngemuva kokuqeda inqubo, sukuma ungalali kuze kuhlwe.
Ekudleni ngalolu suku, kufanele uzikhawulele kuphela kumajusi wemvelo namanzi.
Esizeni sethu uzofunda konke mayelana nesitshalo - umvini we-Chinese magnolia, izakhiwo zawo ezizuzisayo kanye ne-contraindication, nokusetshenziswa kwezokwelapha.
Uyazi ukuthi i-rosemary ilungele kanjani impilo yethu? Funda ngezimfanelo ezibalulekile zesitshalo sokwelapha kulesi sihloko.
Bheka izinzuzo, izingozi zetiye le-linden, lapha: https://foodexpert.pro/produkty/travy-i-spetsii/lipoviy-tsvet.html.
Ukuhlanza Isibindi kweSorbitol
I-Xylitol ne-sorbitol zivame ukusetshenziselwa ukuhlanza isibindi. Izinzuzo kanye nokulimala kwesibindi kuzohlaziywa ngemuva kokuphela kwenkambiso yezinqubo. Ukuhlanza isibindi nge-sorbitol kubizwa ngokuthi "ukukhala okuyimpumputhe." Okusho ukuthi, ukuhlanzwa kwama-bile ducts esihlabathi kanye neminye imfucumfucu. Ukuphambana kule nqubo ngukubakhona kwama-gallstones amakhulu kanye ne-peptic ulcer ye-duodenum. Yize le ndlela yamukelwa njengomuthi osemthethweni, kufanele yenziwe kuphela ngemuva kokuvakashela udokotela nangomphumela we-ultrasound yesibindi ne-bile. Ngaphandle kwalokho, kungaba yingozi kakhulu empilweni. Ngenqubo yokuhlanzwa, amatshe amakhulu angavala izindunduma ze-bile, okuzoholela ekumeni kwe-bile, inqubo yokuvuvukala nesidingo sokungenelela kokuhlinzwa. Uma kungekho okuphulwa, lapho-ke inqubo uzodinga:
Ibhodlela elilodwa lamanzi amaminerali
2-3 wezipuni ze-sorbitol.
Kusihlwa kuvulwa ibhodlela lamaminerali ukukhipha igesi. Amagremu angama-250 ala manzi afudumele ekuseni. Hlanganisa nezipuni ezingama-2-3 ze-sorbitol bese uphuza le ngxube esiswini esingenalutho. Ngemuva kwalokho kuyadingeka ukuba ulale ngakwesokunene, ubeke i-pad yokushisa ngaphansi kwayo. Udinga ukuqamba amanga kusuka emizuzwini engama-40 kuya emahoreni amabili. Ngemuva kwemizuzu engama-20 ngemuva kokuthatha ingxube, kufakwa amanzi amaminerali asele, kepha ngaphandle kwe-sorbitol. Ngemuva kokuqeda inqubo, ukuqamba amanga akunconyiwe. Ukudla ngalolu suku nakho kuyinto engathandeki. Kungcono ukuphuza ama-juices asanda kufakwa namanzi nsuku zonke. Inqubo yenziwa kangcono izikhathi eziyi-6 zilandelana zonke ezinye izinsuku.
Abangena esikhundleni sikashukela benza kanjani i-sorbitol?
Ngombono wamakhemikhali, i-sorbitol utshwala obunama-atom ayisithupha. Akunamphunga, kepha kunambitheka kamnandi, yize ubumnandi bawo bungushukela.
ISorbitol ibukeka njengempuphu emhlophe enesakhiwo sekristali. Lapho isetshenziswa ekukhiqizeni ukudla kumakwa njenge-E420.
Umphathi werekhodi le-sorbitol ngama-prunes, cishe amagremu ayi-100 ale nto aqukethe ku-100 amagremu. Izithelo zeRowan nazo ziwumthombo ocebile wemvelo we-sorbitol, noma kunjalo, zivame ukutholakala esitofini sikakolweni, ukolweni noma amazambane, ngoba le ndlela yokukhiqiza i-sweetener iyona enomnotho kakhulu.
Isitashi si-hydrolyzed, okuholela ekwakhekeni kwe-D-glucose, bese i- sorbitol itholakala kuyo ngokuncipha kwe-electrolytic noma i-catalytic hydrogenation ngaphansi kwengcindezi ephezulu.
Umkhiqizo otholwe ikakhulukazi uqukethe i-D-sorbitol, kepha futhi uqukethe ukungcola kwe-hydrogenated saccharides, njenge-mannitol, i-maltitol, njll. Kubaluleke kakhulu ukuqaphela ukuthi okuqukethwe ushukela okunjalo kulawulwa ngamazinga okuhlanzeka, ngoba angaba nomthelela omubi emzimbeni lapho udliwa kumthamo omkhulu.
Njengamanje, ukukhiqizwa kwe-sorbitol emhlabeni wonke cishe ngamathani angama-800 ngonyaka.
Ingabe isetshenziselwa ukulahleka kwesisindo (nge-tube)
Ngale njongo, i-sorbitol ayisetshenziswa.. Ekudleni kokudla, kuyadingeka, kusiza ukuqeda ubuthi, uketshezi olwedlulele, futhi kungaba nengqondo ukukuncoma ukuthi ulwe namakhilogremu angeziwe. Kepha Maye.
Inkinga okuqukethwe kwayo okuphezulu kwekhalori, ukuntuleka kwezakhiwo ezivuthayo. Inqubo okuwukuphela kwayo ewusizo kulokhu maqondana nokuthukuthela (ukuhlanza), enwebisa amathuba okusebenza ukuze uthuthukise umzimba futhi unganconywa njengendawo yokuqala yalabo abangathanda ukulungisa isibalo sabo.
Ukubopha nge-sorbitol kwenziwa kanjena. Thola amanzi amaminerali nge-choleretic (isibonelo, i-Essentuki 4 noma i-7, i-Arzni, iJermuk). Yiyeke ivuleke isikhashana ukuze idedele igesi ngokuphelele uma amanzi esekhishwe i-carbon. Ekuseni ngemuva kokuvuka, uthele ingilazi yamanzi anjalo bese ufaka i-1 tsp. i-sorbitol, isiphuzo bese ulala emuva cishe amahora 2. Ngalesi sikhathi, udinga ukugcina isibindi sifudumele, ngokwesibonelo, ngaphansi kwephampu lokushisa elingashisi kakhulu.
Uzofunda amaqiniso athakazelisa kakhulu ngezinzuzo, izingozi ezingaba khona ezingena nge-sweeteners, kufaka phakathi i-sorbitol, kuvidiyo elandelayo:
Lesi sikhundla sikashukela singaletha izinzuzo ezinhle kumuntu uma sisetshenziswe kahle, sibheka konke "izingibe" ezingabakhona. Kulokhu, izincomo ezonikezwa udokotela oholayo, kucatshangelwa ubudala nezimpawu zomuntu ngamunye, zizoba usizo.
Uyayithanda i-athikili? Ukukala bese wabelana nabangane bakho kumanethiwekhi omphakathi!
Bhalisela ukuvuselelwa kwesayithi nge-RSS, noma hlala ubukele i-VKontakte, Odnoklassniki, Facebook noma i-Twitter.
Bhalisela ukuvuselelwa nge-E-mail:
Tshela abangane bakho! Tshela ngale ndatshana kubangani bakho kunethiwekhi yakho oyithandayo oyisebenzisayo izinkinobho ezingaphansi kwendatshana. Ngiyabonga!
Naphezu kokungabikho kwe-contraindication, i-sorbitol ayinconywa ezinganeni. Umzimba wezingane onempilo ufaka ngokuphephile futhi usebenzise amandla amaningi, ngakho-ke ushukela ulusizo ngisho nasezinganeni. Uma ingane inesifo sikashukela, ushukela ufakwa esikhundleni se-sweetener. Imvamisa lezi zingane zinikezwa i-sorbitol ngqo. Izinzuzo kanye nokulimazeka kwesifo sikashukela kule nto kulungile kakhulu esitho esincane. ISorbitol inezinto eziningi ezisebenzayo:
ayikhulisi ushukela wegazi,
kuthinta kahle ukusebenza kwamathumbu,
Kumodosi olinganiselayo, ayinayo imiphumela emibi.
Ukwakheka nokuqukethwe kwekhalori kwe-sorbitol
Okuqukethwe kwekhalori kwalowo obambele ushukela yi-sorbitol - 354 kcal nge-100 g, oku:
Amaprotheni - 0 g
Amafutha - 0 g
Ama-carbohydrate - 94,5 g
Eqinisweni, ukwakheka kwe-sorbitol akufani kakhulu noshukela ojwayelekile ocwengiweyo - awunawo amaprotheni namafutha, cishe aqukethe ama-carbohydrate, ngaphandle kokuthi anokuqukethwe kwekhalori okuncane. Kodwa-ke, i-sorbitol igxile ngokuphelele, eyakha izinzuzo zayo uma uyiqhathanisa noshukela omhlophe.
Izici eziwusizo ze-sorbitol
Esithombeni, ushukela obambele i- sorbitol
Inkinga enkulu ngoshukela ukuthi yona ngokwayo ayinawo amavithamini, kepha la mavithamini adingeka ukumuncwa kwawo. Lokhu kusho ukuthi ngokudla ushukela omhlophe ocoliweyo, sakha ibhalansi engemihle yalezi zinto futhi siphoqa umzimba ukuthi uphile ngesikweletu. ISorbitol ayidingi amavithamini e-B ukuze igcotshwe, futhi lokhu sekuyenza i-sweetener ewusizo kakhulu, kodwa-ke, ngaphezu kokugcina amavithamini, izakhiwo ezizuzisayo ze-sweeteners ziyasebenza naku:
Uhlelo lokugaya. I-sweetener sorbitol ithuthukisa ukuhamba kwamathumbu, okungasizi nje kuphela ukulwa nezifo eziningi zesistimu yokugaya ukudla, kepha futhi kunikela kwinqubo esebenza kahle yokugaya - izakhi ezizuzayo zidonswa kakhulu futhi eziyingozi zithunyelwa ngokushesha. Ngakho-ke, i-sorbitol yinto enhle ekuvinjelweni kokuqina komzimba. Kubalulekile ukusho ukuthi i-sweetener inomphumela omuhle kwizitho zokugaya ezinjeng kwesibindi, izinso kanye nesinye. Inika amandla umsebenzi walezi zitho, inciphisa amathuba okuthuthuka kuwo.
U-koqweqwe lwamazinyo namazinyo. Kunomphumela omuhle we-sorbitol ekuvinjelweni kwezinkinga zamazinyo. Ine-calcium ne-fluorine, enisa amaminerali koqweqwe kanye namazinyo, ibenze babe namandla, bavikele ekuweni kwamazinyo. Kuyaphawuleka ukuthi ushukela ojwayelekile, kunalokho, ubhubhisa i-koqweqwe lwawo futhi wandise nengozi yokubola kwamazinyo.
Ukuvimbela Ukuhlanzeka. ISorbitol iyi-diuretic enhle, ngakho-ke lapho isetshenziswa, uketshezi olwedlulele lususwa ngempumelelo emzimbeni, amathuba okukhula kwe-edema ancishisiwe.
Isiza ukuguqula ushukela wegazi ngokujwayelekile. Kwabashukela, i-sorbitol nayo ingcono kakhulu kunoshukela ojwayelekile, ngoba ngokungafani neyokugcina ine-index ehlukile ye-glycemic (GI). I-GI yeshukela - amayunithi angama-70, i-sorbitol - 11.
Ukuthuthukiswa kwesimo sesikhumba. ISorbitol nayo ingaxazulula izinkinga zesikhumba. Ikhulula ukulunywa futhi kukhonkolo kahle.
ISorbitol inezakhiwo eziningi ezisebenzayo ezifanayo nge-xylitol. Zombili izinhlayiya zinomphumela omuhle ohlelweni lokugaya ukudla, amazinyo noqweqwe lwawo, azibangeli ukugxuma kushukela wegazi. Kodwa-ke, i-xylitol ilahlekelwe i-sorbitol kancane kilojoule: 367 kcal dhidi 354 kcal. Umehluko mncane, kepha noma kunjalo, i-sorbitol ithanda kakhulu ukunciphisa isisindo. Kodwa-ke, kufanelekile ukuqaphela ukuthi uma i-xylitol ingenakho ukunambitheka okuthile, ngaphandle kokhanyo olusha olukhanyayo, khona-ke i-sorbitol ine-flavour ebizwayo, okungewona wonke umuntu oyithandayo.
Ungayikhetha kanjani indawo kashukela ye-sorbitol?
Esithombeni, ushukela obambele i- sorbitol ku-powder
I-Sweetener ikhiqizwe kusukela ngama-30s wekhulu leminyaka elidlule, futhi uma ngaphambili yayithengiswa kuphela ngohlobo lwe-crystalline powder, namuhla i-sorbitol nayo ingathengwa ngohlobo lwewuketshezi futhi njengengxenye yokuxubana kwama-sweeteners ahlukahlukene. Isisindo nentengo kuyehluka kumenzi.
Imikhiqizo edume kakhulu:
ISorbitol yenkampani "Amaswidi Anempilo" - ama-ruble ayi-100 kumagremu ayi-300,
ISorbitol evela enkampanini ethi "Umhlaba Omnandi" - ama-ruble ayi-120/75 ama-350 no-500 amagremu, ngokulandelana
I-Nowasweet sorbitol - ama-ruble angama-228 ngamagremu ayi-500.
Ungathenga i-sorbitol esitolo esikhulu, imvamisa ibekwa emnyangweni okhethekile kwabanesifo sikashukela. Futhi, isidakamizwa sithengiswa emakhemisi, lapho kuvame khona ukuthenga amaswidi e-sorbitol awusizo, okuyinto ngokudla kwezokwelapha okusindisayo kwangempela.
Kuyaqapheleka ukuthi kwe-sweetener, i-sorbitol inentengo yesabelomali esifanele futhi wonke umuntu angayikhokha. Amaswidi amaSorbite nawo ayabizi: ngokwesibonelo, ibha likashokholethi lingathengwa ngama-ruble angama-80-100, iphakethe lamaswidi angama-200 g - kuma-ruble ayi-180-250.
Ama-symbolol ahlukahlukene futhi ayathandwa, izindleko zawo zesilinganiso ngama-ruble ayi-150 nge-250 ml.
Impahla ye-sorbitol yokugcina isakhiwo samakhemikhali ngesikhathi sokwelashwa okushisa senza kube yindawo yonke futhi ivumela ukusetshenziswa kokupheka kwezitsha ezibandakanya ukufudumeza.
Ake sibheke ezinye izindlela zokupheka ezithokozisayo:
I-cheesecake enempilo. I-dessert esimnandi sekhalori ephansi elingana kahle ekudleni. Ushizi we-cottage shizi ongenamafutha (500 g) no-ushizi we-ricotta (450 g) no-ukhilimu omuncu (200 g), uma uhlanganiswa kahle, ushaya nge-mixer kuze kube ukuthungwa okuthambile kokhilimu. Faka i-sorbitol nejusi kalamula ukunambitha, lapho ukunambitheka kufanelana, ukuvusa amaqanda (izingcezu ezi-2), i-vanilla (ingcosana) kanye nokhwenyana kakhukhunathi ukunambitha. Yenza ikhekhe lembewu nezinsuku. Esokuqala kufanele sithathwe kuqala ku-crusher yamantongomane, umqulu wokugcina ungene ngohlobo lwenyama. Hlanganisa izithako ngesilinganiso esingu-1: 1, cishe i-100 g yembewu no-100 g wezinsuku kuzodingeka ikhekhe. Beka ikhekhe esitsheni sokubhaka, uhlehle isisindo esili-curd kusuka phezulu. Bhaka kuhhavini ku-180 ° C imizuzu eyi-10. Thola ikhekhe lokudla langempela. Ama-cheesecake ahlala athiwe amnandi, futhi izihloko ezinoshukela zinhle kuwo. Wena ngokwakho ungapheka indlu enjalo: uthele noma yimiphi amajikijolo ngenani elincane lamanzi, ubilise imizuzu emi-5, uxove wonke amanzi, ushaye amajikijolo nge-blender engaphansi bese ufaka uju ukunambitha noma, futhi, i-sorbitol.
I-Sorbitol jam. Ngendlela, i-sorbitol akuyona nje i-sweetener, kepha futhi isilondolozi esihle; ukuyisebenzisa ukwenza ukulondolozwa okwenziwe ekhaya kungumbono omuhle. Ukwenza ijamu le-berry, hlambulula amajikijolo (1.5 kg), udlulisele esitsheni esikhulu, usimboze nge-sorbitol (1 kg). Pheka ujamu nsuku zonke imizuzu engu-15-20. Abilayo izimbiza, uthele ujamu, roll up. Khumbula ukuthi i-sorbitol izodinga okuncane ukwenza ijamu yezithelo, ngoba izithelo zimnandi kunamajikijolo. Ngakho-ke, nge-1 kg yama-apula, cishe i-700 g ye-sorbitol izodingeka.
I-karoti pudding. Enye indlela elula futhi enempilo ye-dessert enama-sorbitol. Izaqathe ze-grate (i-150 g) ku-grater enhle, ugcwalise ngamanzi afudumele amahora amathathu, kungcono ushintshe amanzi kathathu ngalesi sikhathi. Cwilisa izaqathe, ungasebenzisa i-gauze kulokhu. Hlanganisa amazambane abunjiwe ngobisi (60 ml) nebhotela (1 tbsp.), Simmer epanini imizuzu engu-10. Hlukanisa iqanda (ucezu 1) ku-yolk namaprotheni, ugaye owokuqala nge-cottage shizi (50 g), ushaye owesibili nge-sorbitol (1 tsp). Faka zonke izithako kusisindo se-karoti, imizuzu imizuzu embalwa.Dlulisa i-dessert yesikhathi esizayo esitsheni sokubhaka, ubhake imizuzu engama-20 emazingeni okushisa we-180 ° C. Yidla isitsha esiphelile ngo-ukhilimu omuncu.
Amakhukhi we-Oatmeal. Futhi le khukhi i-crunching emnandi kakhulu ngetiye. Roll omisiwe (150 g) ngokusebenzisa isigaxa senyama, ama-walnuts ama-100 (g g). Hlanganisa omisiwe, ama-walnuts, ne-oatmeal (500 g). Thela emafutheni omnqumo (100 ml), engeza i-sorbitol (1 tsp), isoda (1 tsp). Hlanganisa zonke izithako kahle, faka amakhukhi. Bhaka imizuzu engu-15 ekushiseni okungu-180 ° C. Lapho ulungiselela la makhukhi ku-sorbite, akudingekile ukulandela imiyalo eqondile. Ungathatha ezinye izithelo namantongomane.
I-peud strudel. I-dessert enempilo, engenamahloni yokuhlobisa ngisho netafula lomkhosi. Hlanganisa ufulawa wokusanhlamvu okuphelele (50 g), uwoyela kakhukhunathi (50 ml), amanzi (inkomishi eyi-1/2) nesipuni sikasawoti. Sika i-pearl (izingcezu ezi-2), usike ama-hazelnuts (50 g), engeza ujusi kalamula (2 tbsp) kanye ne-nutmeg (0.5 tsp). Faka zonke izithako zokugcwalisa. Khipha inhlama kancane, udlulise ukugcwaliswa kuyo, uyisonge emqulwini omkhulu. Bhaka imizuzu engama-30 emazingeni okushisa angama-210 ° C. Pholisa i-strudel eqediwe, usike, uthele ngesiraphu ku-sweetener.
Amaqiniso athakazelisayo nge-sorbitol sweetener
ISorbitol ayisetshenziswanga kuphela njenge-sweetener ekwakheni isigaba sezimpahla eziningi - i-confectionery, ubisi, imikhiqizo yenyama, iziphuzo, njll. Izakhiwo zayo ezibanzi zisetshenziswa emikhakheni ehlukahlukene yezokukhiqiza, ngokwesibonelo, ekwenziweni kwezimonyo nasekhemisi.
Emithini yabantu, ukusetshenziswa kwe-sorbitol kuvame ukunconywa ekwelapheni isibindi nezinso. I-Sweetener ixubaniswa namanzi amaminerali futhi imvamisa ne-infusions yamakhambi futhi idakiwe ngamanani amakhulu. Ngenxa yalokhu, umphumela we-laxative kufanele usebenze futhi uqhubeke inqubo yokuhlanzwa. Noma kunjalo, kubalulekile ukuphawula ukuthi akuhambi kahle ukwenza inqubo enjalo wedwa ngaphandle kwemiyalelo kadokotela, yize iqiniso lokuthi kwi-Intanethi ungathola izibuyekezo eziningi ezinhle ngokuhlanza nge-sorbitol.
Cishe i-15% yesabelo somhlaba wonke sokukhiqizwa kwe-sorbitol iya ekukhiqizeni i-ascorbic acid. Imvamisa ingabonakala kwamanye amavithamini nakwimithi, ezimeni eziningi isetshenziswa ukwenza ngcono ukubonakala komzimba. Kodwa-ke, kwezidakamizwa ze-choleretic, ingaba ngenye yezinto ezisebenzayo.
ISorbitol nayo ikhiqiza i-biomass. Ngokubuyisela le ngxenye, i-hexane iyatholakala, esetshenziswa njenge-biofuel.
I-Sorbitol isetshenziswa imboni yezindwangu, futhi abenzi bezindwangu benziwa kuyo.
Bukela ividiyo emayelana nezinzuzo nokulimala kwe-sorbitol:
ISorbitol iyi-sweetener yemvelo, esetshenziselwa kakhulu ukufaka ushukela ekudleni okudla nokwelashwa. Futhi, imikhiqizo ehlukahlukene ye-confectionery yenziwa ngesisekelo sayo. Kodwa-ke, kubaluleke kakhulu ukulandela imiyalo yokusetshenziswa kwe-sorbitol ekudleni, umthamo wansuku zonke ophephile ungama-40 amagremu. Ngaphezu kwalokho, noma ngabe kungekho okuphikisanayo, ngemuva kwezinyanga ezimbalwa ukusebenzisa i-sweetener ekudleni, idinga ukushintshwa futhi umzimba uvunyelwe ukuphumula.